Qarax miino oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaQarax miino oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho
Qarax miino oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho
Hiiraan Xog, July 21, 2018:- Wararka naga soo gaaraya Xaafadda Galmudug gaar ahaan wadada Aada dhanka Ex Kontorool ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi Qarax lagu beegsaday Sarkaal ka tirsan ciidamada Booliska Soomaaliyeed.
Sarkaalka ayaa la sheegay in uu watay gaari Surf ah, waxaana Qaraxa uu ahaa Miinadda dhulka lagu Aaso.
Goobjoogayaal ku sugan goobta uu falku ka dhacay ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay in hal qof oo shacab ah uu geeriyooday, halka Askari la socday Sarkaalka uu soo gaaray dhaawac Fudud.
Wararka waxa ay sheegayaan in Qaraxa uu dhacay Markii gaariga uu watay sarkaalka qeybtiisa hore ay dhaaftay goobta lagu Aasay Miinadda.
Ruuxa dhintay ayaa lagu sheegay in aheyd haweenay Wadada Mareysay.
Qaraxa kadib goobta waxaa gaaray Ciidamada Miini baarista iyo Ciidamo kale oo hubeysan, kuwaasi oo goobta ka qaaday ,Askariga ka tirsanaa Booliska ,iyaga oo halkaasi ka sameeyay baaritaanada la xiriira Qaraxa waxaa sababay Qaraxa.
DAAWO SAWIRO:- Ciidamada maamulka Jubbaland oo fashiliyay gaari lagu xeray Qarax